खबर मञ्च, Author at खबरमञ्च - Page 4289 of 4415 खबरमञ्च
You are here: Home > Articles by खबर मञ्च - Page 4289
आज गुरु पूर्णिमा मनाईंदै
By खबर मञ्च / July 19, 2016 / समाज / Comments Off on आज गुरु पूर्णिमा मनाईंदै
विर्तामोड । मंगलबार आषढशुक्ल पूर्णिमा, गुरुप्रति श्रद्धा र सम्मान प्रकट गर्दै गुरुपूर्णिमा मनाईदैछ । प्राचीनकालको गुरुकुल शिक्षाबाट प्रारम्भ भएको यस पर्वमा विद्यार्थीले आफूलाई विद्या, विनय र शिष्टता प्रदान गर्ने शिक्षकलाई मिठा परिकारसहित उपहार पनि दिने चलन छ । यस दिनलाई व्यास जयन्ती पनि भन्ने गरिन्छ । यो दिनले विद्यार्थी र शिक्षकबीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ रुपमा स्थापित […]
कर्मचारीको अवरोधले चामल अनलोड हुन पाएन
By खबर मञ्च / July 19, 2016 / छापामा / Comments Off on कर्मचारीको अवरोधले चामल अनलोड हुन पाएन
विर्तामोड । बंगलादेश सरकारले दिएको अनुदानको चामल लिएर आएका १७ वटा ट्रक नेपाल खाद्य संस्थानका एकजना सरुवा भएर गएका कर्मचारीका कारण खाद्य संस्थानमा अनलोड हुन सकेका छैनन् । नेपाल खाद्य संस्थानको विर्तामोड गोदाममा थन्क्याउन चामल लिएर आएका ति ट्रक संस्थानकै पूर्व स्टोर किपर यज्ञप्रताप अधिकारीले संस्थानमा काम गर्ने बाहेकका मजदुरलाई संस्थानको हाताभित्र प्रवेश गर्न नदिएपछि एक […]
स्थानीय तह ५ सय ६५ बनाउन प्रस्ताव
By खबर मञ्च / July 19, 2016 / छापामा / Comments Off on स्थानीय तह ५ सय ६५ बनाउन प्रस्ताव
काठमाण्डौ । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले पाँच सय ६५ वटा स्थानीय तह प्रस्ताव गरेको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ। चार महिना लामो अध्ययन र छलफलपछि आयोगले स्थानीय तहको संख्या प्रस्ताव गरेको हो। आयोगले स्थानीय तह पुनर्संरचनाका लागि पाँच आधार तय गरेको छ। आयोगका सदस्यसचिव डा. हरि पौडेलका अनुसार भौगोलिक क्षेत्रअनुसारको जनसंख्या वितरण, क्षेत्रफल, जिल्ला […]
अोलीले देउवा र प्रचण्डलार्इ सोधे-द्वन्द्व चर्काउने कि मिलेर जाने?
By खबर मञ्च / July 19, 2016 / छापामा / Comments Off on अोलीले देउवा र प्रचण्डलार्इ सोधे-द्वन्द्व चर्काउने कि मिलेर जाने?
काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नयाँ सरकार गठनमा संवैधानिक अस्पष्टता रहेको भन्दै नयाँ गठबन्धन बनाएका कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई स्पष्ट पार्न प्रस्ताव गरेका छन्।कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सोमबार साँझ बालुवाटार बोलाएर ओलीले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन्। संविधानभित्रका प्रावधानहरू स्पष्ट नरहेको उल्लेख गर्दै ओलीले यसमा सबै […]
केसी समर्थक चिकित्सकद्वारा टिचिङको अोपीडी बहिष्कार
By खबर मञ्च / July 19, 2016 / छापामा / Comments Off on केसी समर्थक चिकित्सकद्वारा टिचिङको अोपीडी बहिष्कार
काठमाण्डौ । अनशनमा बसेका चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक डा.गोविन्द केसीका सर्मथक ‘रेजिडेन्ट’ चिकित्सकले दैनिक दुई हजारभन्दा बढी बिरामीले सेवा लिँदै आएको त्रिवी शिक्षण अस्पतालको ओपीडि सेवा मंगलबार देखि बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन्। अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छ। यसअघि डा. केसीका सर्मथक विद्यार्थीको दबाबले संस्थानको पठनपाठन प्रभावित बन्दै आएकोमा रेजिडेन्ट चिकित्सकले काम गर्न छाड्नेबित्तिकै अस्पतालको आधा […]
दम्पतीको यौन भिडियो बाहिरिएपछि….
By खबर मञ्च / July 19, 2016 / छापामा / Comments Off on दम्पतीको यौन भिडियो बाहिरिएपछि….
काठमाण्डौ । राजधानीकै एक दम्पती। बिहे भएको लामै समय बितिसकेको थियो। एक दिन पतिले पत्नीलाई आफ्ना गोप्य क्रियाकलाप क्यामेरामा कैद गर्ने प्रस्ताव गर्छन्। पत्नी सुरुमा त आनाकानी गर्छिन्। तर, पतिले आफ्ना गोप्य क्षण अविस्मरणीय बनाउने भन्दै कुनै जोखिम नरहेको आश्वस्त पारेपछि उनी तयार भइन्। नागरिक दैनिकमा समाचार छ। त्यो भिडियो आफूसँग् सुरक्षित रहेकोमा उनीहरु ढुक्क […]